February 16, 2020 - khitalinmedia
❤ညီမလေး❤ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်(ဒီစာကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ)
February 16, 2020 Khitalin Media 0
❤ညီမလေး❤ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် 1) စာတတ်တဲ့ယောက်ျားထက် စာနာစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။ 2) ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ်ရှိသူကိုသာ ရွေးချယ်ပါ ။ ။ 3) ငွေချမ်းသာသူထက် စိတ်ထားရိုးဖြောင့်သူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ 4) ဂုဏ်ရှိသူထက် ပြုံးရယ်နိုင်စေသူကိုသာ ရွေးချယ်ပါ ။ ။ 5) […]
ဈေးကြွေး ၁၀၀၀ အကြွေးတောင်းသည့်ကိစ္စ မကျေနပ်သဖြင့် အကြွေးရှင်၏ ကလေးငယ်ကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်
ပဲခူးတိုင်း လက်ပံတန်းမြို့နယ်တွင် ဈေးကြွေး ၁၀၀၀ အကြွေးတောင်းသည့်ကိစ္စ မကျေနပ်သဖြင့် အကြွေးရှင်၏ ကလေးငယ်ကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ယွန်းသွယ်ကျေးရွာ အုပ်စု စာဖြူစုကျေးရွာမှာ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေက ဈေးကြွေး ၁၀၀၀ ကျပ်ကျော် တောင်းတာ မကျေနပ်လို့ အကြွေးရှင်ရဲ့ သားဖြစ်သူ ၃ […]
အခဈြစဈ ဆိုတာ တဖွညျးဖွညျး ရှားပါး လာတာနဲ့ အမြှ သငျ့ကို စိတျရငျးအမှနျနဲ့ ခဈြတဲ့သူ၊ ဘာအကြိုးကိုမှ မမြှျောကိုးပဲခဈြတဲ့သူ၊ သစ်စာရှိရှိ ခဈြတဲ့သူဆိုတာ တကယျကို ရှားပါးလာမှာ ဖွဈပါတယျ …။ တကယျလို့ ခုဖျောပွတဲ့ အခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီနတေဲ့ ခဈြသူ မြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားရတယျ ဆိုရငျတော့ […]
ခဈြသူအပျေါ အရမျးကို စိတျနှဈပွီး အရူးအမူး ခဈြတဲ့သူတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ဆိုးကြိုး ၅ ခု
(၁) ပူပငျသောက ရောကျခွငျး ကိုယျ့ရဲ့ အခဈြစိတျတှေ အားလုံးက သူမှ သူဘဲ ဖွဈနတေဲ့ အခါ သူ့ဘကျက ကိုယျ့ကို ထားသှားမှာ၊ အမှားလုပျမိမှာ၊ ကိုယျ့အပျေါ သစ်စာဖောကျမှာ စသဖွငျ့ အခြိနျတိုငျး စိုးရိမျပူပနျစိတျ တှနေဲ့ ဖွတျသနျးနရေပါလိမျ့မယျ …။ ဖွဈနိုငျရငျ ကိုယျ့အနားမှာဘဲ အခြိနျတိုငျး […]
စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ နာမည်ကျော် ဒီဆောင်းတစ်ည သီချင်းကို အသံပါရမီထူးလှတဲ့ မျက်မမြင်ဇနီးမောင်နှံရဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေမှု အွန်လိုင်းမှာလူကြည့်များနေ
အသံပါရမီထူးလွန်းတဲ့ မျက်မမြင်ဇနီးမောင်နှံတို့ သီဆိုဖျော်ဖြေသွားတဲ့ ဦးထီး သီဆိုထားတဲ့ “ဒီဆောင်းတစ်ည” သီချင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်….. အဆိုပါ မျက်မမြင်ဇနီးမောင်နှံဟာ မေသက်ထားဆွေနဲ့ ချယ်ရီသင်းတို့ရဲ့ သီချင်းတွေကိုလည်း သီဆိုခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ အဆိုတော်ချယ်ရီသင်းရဲ့ သီချင်းနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ချင် သီချင်းလေးသီဆိုခဲ့တဲ့ မျက်မမြင် အစ်မကြီးတစ်ယောက်ဟာဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ အသံပါဝါ ဆိုပုံဆိုဟန်တွေကောင်းလွန်းတာကြောင့် […]
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အကြောင်း ချစ်​သူအ​ပေါ် အနိုင်​ယူ လိုတဲ့ စိတ် ​ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်​​စေချင်​တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်​တတ် ​ကြတယ်။ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး​တွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း​ပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ထား […]
ကားမှတ်တိုင်မှာ သင်္ကန်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရုံထားပြီး ဖိနပ်မပါဘူး ရပ်နေတာတွေ့တော့ ဘာလဲဆိုပြီး လှမ်းကြည့်မိလိုက်သော အခါ
ဒီနေ့ Dead Body နှစ်ခုပို့အပြီး အိမ်စောစောပြန်နားမယ်ပေါ့။ ပြန်လာတဲ့လမ်းက ကားမှတ်တိုင်မှာ သင်္ကန်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်ရုံထားပြီး ဖိနပ်မပါဘူး ရပ်နေတာတွေ့တော့ ဘာလဲဆိုပြီးလှမ်းကြည့်မိတယ်။တချို့သင်္ကန်းဝတ်တွေက မူးယစ်သောက်စားပြီး ဖိနပ်တောင်မစီးနိုင်အောင် မူးနေတတ်တယ်လေ။ အဲဒါမျိုးတွေ့လို့ ဘေးကလူအဖော်ကောင်းလို့ကတော့ ချုပ်ပြီးရဲစခန်းပို့ပြီးသားပဲ သေချာကြည့်မှ ပုခုံးပေါ်က ဒုကုဋ်နဲ့ ယပ်တောင်ကိုင်ထားတာကိုတွေ့တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ တခုခုထူးခြားတယ်ဆိုပြီး ကားကိုလမ်းဘေးထိုးရပ်လိုက်တယ်။ အဲလိုသင်္ကန်းကျကျနနခြုံပြီး […]
နောက်ဆက်တွဲကုသမှုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်ကုမှပဲအဆင်ပြေတော့မယ်
ဆေးထပ်ကုဖို့ပိုက်ဆံလိုငွေ သိန်း (၁၅၀၀) ထပ်လိုနေပါတယ် ၊ ပထမ အလှူခံရရှိငွေ သိန်း (၁၀၀၀) ကကုန်တော့မှာပါ။ဖခင်မှာစီမံဘဏ္ဌာဝန်ကြီးရုံး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး လစာ – 312000 ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်…. လက်ရှိမှာ ပထမ လှူဒါန်း‌ရရှိငွေ သိန်း (၁၀၀၀)ဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ Samitivej children’s hospital မှာတက်ရောက်ကုသနေပါတယ် ၊ […]
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆)ရက်မှ ၊ (၂၃)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန်
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆)ရက်မှ ၊ (၂၃)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. […]
သင့်ရဲ့အဆုတ်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာ ပြနေတဲ့လက္ခဏာ (၅) မျိုး
ခေတ်ကတိုးတက်လာပြီး လူသားအရင်းအမြစ်ကများပြားလာတဲ့အချိန်မှာ သန့်စင်တဲ့လေထုကလည်း ရှားသထက်ရှားပါးလာပါတယ်။ ဒီတော့ လူသားတွေရဲ့အဆုတ်ကို ပိုပိုပြီး ထိခိုက်လာစေပါတယ်။ အဆုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့ထဲမှာ သင်ပါနေပြီဆိုတာကိုတော့ ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဖြစ်လာရင် မပေါ့ဆဘဲ ဆေးစစ်ကုသမှုခံယူပြီး အဆုတ်ကိုသေချာဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ (၁) ပခုံးနဲ့နောက်ကျောနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း နောက်ကျော၊ ပခုံးနဲ့ ရင်ဘတ်နေရာတွေမှာ တစ်ချက်တစ်ချက်စူးပြီးနာတာမျိုး ဆက်တိုက်ဖြစ်နေရင် အဆုတ်ကင်ဆာအစပြုခြင်းလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေက […]